बागलुङ नगरपालिकाको छतमै देखिन्छ खुल्लम् खुल्ला भ्रष्टाचार ! नगरपालिकामा करोडौँको चलखेल ! ज्यालादीरीको हालीमुहालीले कर्मचारी यन्त्र तहस नहस ! – ebaglung.com
२०७५ असार २७, बुधबार १२:४६	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार, विविध
पाईप लाने को, को हुन ? क, कसले बेचेर खाए ? कसले कहाँ कुन योजना बनाए ?
बागलुङ २०७५ असार २७ । असार महिनाको आखिरी सातामा बागलुङ नगरपालिका कार्यालय रातामाटामा बिल भुक्तानी लिन जाने होटेल, हार्डवयर, स्टेशसनरी आदि व्यवसायी लगायतका ईष्टमित्रहरुको भीड लागेकोछ । नगरपालिकाका कर्मचारीहरु नगरपालिका भवनको छतमा बसेर बिल भर्पाई मिलान कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । कोषले खाता रोक्का गर्नु अगावै सबै हरहिसाब मिलानमा नगरपालिका जुटेको छ । यस दृश्यलाई हेरिरहेका नगरबासीहरुले नगरपालिकामा खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् ।
बागलुङ मालपोत कार्यालयका हाकिमले रु १० हजार घुस खाएको देख्ने अख्तियारका आँखाले बागलुङ नगरपालिकामा भएको करोडौँको भ्रष्टाचार किन देख्दैन भनी नगरबासी चिच्याई रहेका छन् ।
नगरपालिकाले विगत एक वर्ष भित्र बितरण गरेको पाईप, जाली सिमेन्ट आदिको परिमाण सुन्ने हो भने जो कसैको पनि होसै उड्छ । ईबागलुङलाई प्राप्त विवरण अनुसार एक वर्षमा बिना योजना बिना ईष्टमेट हँचुवाको भरमा वितरण गरिएको पाईप पूरा बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा विछ्याउदा पनि बढी हुन्छ । यसरी करोडौको पाईप जालीहरु तोकादेशमा बाँडेर आर्थिक अपचलन भएको छ ।
एक वर्षमा कसको आदेशबाट कसले कति पाईप जाली लगे ? हेरौँ विवरण:
यती ठुलो परिमाणको पाईप जाली कुन ठाउँमा छ र कुन योजनामा प्रयोग भएको छ भन्ने सम्म न दिनेलाई थाहा छ न लैजानेले नै भन्छन । समाचारको विश्वास गर्ने हो भने वितरण गरिएका पाईप जालीहरु ५ प्रतिशत पनि सहीकाममा प्रयोग गरिएको छैन । पाईप जाली लैजाने अधिकाँशले सस्तो मुल्यमा बेचेर पैसा खल्तीमा हालेका छन् । कुनै कुनैले सम्वन्धित हार्डवयरमा कुपन दिने र त्यस्मा कमिशन मिलाएर नगदमा भुक्तानी लैजाने गरेको पनि सुनिएको छ ।
आफुलाई महान ठान्नेहरुले कसैलाई अघिसारेर उनीहरुको नाममा पाईप निकासा गरेर आफुले रजाई गर्ने पनि देखिएका छन् ।
कसले पाईप जाली लगे सदुपयोग वा दुरुपयोग कति भएको छ त्यस्को अनुगमन नगरपालिकाले गरेको छैन । अनुगमन समितिमा नगरपालिकाका स्थायी प्राविधकलाई हटाएर ज्यालादारीमा भर्ना गरिएका प्राविधिकलाई समितिको सदस्य सचिव बनाईएबाटै प्रष्ट हुन्छ कि अनुगमनले कुनै अर्थ राख्दैन ।
बागलुङ सदरमुकाम स्थित श्रृष्टि र सर्वसिद्धि हार्डवयर, स्थानीय होटेल व्यवसायीहरुले पछिल्लो पटकको बिल भुक्तानी नभएकोमा नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराईरहेको दृश्य हिँजो नगरपालिका देखियो । कसैको रु १९ लाख कुनैका रु ८ लाख त कुनै हार्डवयरको बिल नगरपालिकाबाट भुक्तानी नभएको बताईरहेका थिए भने मेघा एण्ड सन्स हार्डवयरले २०७५ असार १९ गते झण्डै रु ४ लाखको बिल भुक्तानीका लागि नगरपालिकामा पेस गरेका छन् ।
अर्कोतिर नगरपालिकाले दिनमा हजारौँ लिटर ईन्धन (पेट्रोल डिजल) खपत गरिरहेको देखिन्छ । ईन्धनमा पनि छोटे हाकिमहरुको ठुलो चलखेल हुनेगरेका श्रोतले बतायो । पेट्रोल पम्पहरुमा आफै कुपन लेखेर दिने अनि कमिशन दिएर नगद बुझ्ने र खल्तीमा हाल्ने गरेको चर्चा व्याप्तछ । एकजनाले त भनिपनि हाले, खानेपानीको धाराबाट एक छिन मात्र फोहोर पानी झर्छ नगरवासी काकाकुल छन् तर नगरपालिकाको ईन्धन धाराबाटा अबिरल पेट्रोल र डिजल बगिरहेको हुन्छ ।
आफन्त, आसेपासे र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक सहयाताको नाममा दिनहुँ हजारौँ रुपयाँ वितरण भैरहेको छ । नगरप्रमुखले मात्रै गत केहि महिनामा रु १५ लाख आर्थिक सहयता बाँडेका छन् । हिँजै असार २६ गते एक जना आफन्तले रु ३० हजार सहायता दिनु भन्ने तोक लिएर कार्यकारी अधिकृतको कक्षमा पुगेका थिए ।
गाउँघरमा सिँहदरबार आएपछी बागलुङको बालुवाटार निवासमा रोजना हजारौँ रुपयाको जलपान, पाहुनापासा, पार्टी कार्यकर्ताहरुको लागी खानपान एवं रात्रिपानको लागि छेउमै रहेका चाईनिज होटेलको मासिक लाखौँको बिल नगरपालिकाले तिर्दै आएको पनि चर्चित विषय बनेको छ । नगरपालिकाकाट आयोजना गरिने कार्यक्रमहरुपनि नगरप्रमुखको ईशारामा निश्चित होटेलहरुमा मात्र गरिदै आएको छ । ती होटेलहरुका बिलहरु स्वयं नगरप्रमुखका पीएहरुले संकलन गरेर लेखाबाट भुक्तानी लैजाने गरेको देख्नेहरुलाई कमिशनको नाँगो नाँच भन्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । यति सम्मकी तिउन पकाउने दिउरी देखी डाडु पन्यू सम्म नगरपालिकाबाट भुक्तानी दिन लगाएर घर पठाईने गरेको चर्चापनि चलेकै छ ।
नगरपालिकामा कर्मचारीकहरुको मानमर्यादा, शिष्टाचार, अनुशासन, सदाचार आदि गौण छ । जताततै लथालिंग भताभुँग छ । एक वर्ष नबित्दै तीन जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको स्थानान्तरण गरिएको छ । आसेपासे र ज्यालादारी कर्मचारीहरुव्दारा नै शासित छन सिधा सज्जन कर्मचारीहरु । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथी नै आदेश दिने हैसियत राख्नेहरुको जगजगीले प्रशासन चौपट छ । फोनको भरमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिने परम्पराको पुनराबृती भैरहेको छ । केहि दिन पहिले जिल्ला समन्वय समितिबाट काज सरुवा भै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नगरपालिकामा आएका भीमबहादुर कुँवर नगरपालिका भित्रको भाँडभैलो देखेर आजीत परेको पनि कर्मचारी बृत्तमा चर्चा छ ।
मर्यादा तल पयो भनेर महिनौ हाँजिर नगरेर तलब बुझ्नेहरुले अहिले आएर एकै चोटी हाजिरी कपीमा हस्ताक्षर गरेको दृश्य टुलुटुलु हेर्न बाध्य अन्य कर्मचारीहरुको निरीहपनको ज्वलन्त उदाहरण बागलुङ नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ ।
नगरपालिकामा ज्यालादारी कर्मचारीको भीडभाड छ, अन्य कार्यालयहरुबाट गएका कर्मचारीहरु काम नपाएर लाखापाखा छन् । नगर प्रमुख धुपौरेहरुको ईशारामा नाँची रहेका छन् । उनिहरु मार्फत नै पोषण प्राप्त गरिरहेका छन् ।
जिल्ला प्राविधि कार्यालयका ईन्जिनियर अधिकारी र नगरप्रमुख पौडेल ।
पछिल्लो समय जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर दयाराम अधिकारी काजमा नगरपालिकामा गएपछी सबै उनकै हाली मुहाली रहेको कर्मचारीबृत्तमा चर्चा छ । उनी सबै फाँटहरुमा गएर मेयर साबकहाँ जे गर्नु पर्छ म मार्फत हुन्छ, भन्दै संकेत दिईरहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत निर्देशन दिन सक्ने हैसियत रहेको चुरीफुरी अधिकारीको देख्न सकिन्छ । गत हप्ता नगरपालिकाको बैठकबाट उनलाई नगरपालिकामा हाँजिरभएका मिति देखी मासिक रु ३० हजार भत्ता दिने निर्णय गरिएपछी सो भत्ता रकम भुक्तानीका लागि दबाब दिईरहेपनि लेखाले चेक नकाटेका बुझिएको छ ।
यी जिल्ला ईन्जिनियर अधिकारीले भूकम्प प्राधिकरणबाट मासिक रु १८ हजार भत्ता बुझिरहेका छन् । तलब भत्ता जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट खाईपाई आएका छन् । यसअघी यिनी कार्यरत मनाङ जिल्लामा कमिशन जस्ले दियो उसैलाई ठेक्का पट्टा मिलाउन माहिर मानिएको टिप्पणी निर्माण व्यवसायीहरुवीच चल्ने गरेको छ ।
जब नगर प्रमुखले नगरविकास कोषको ऋण सहयोगमा निर्माण भैरहेको बसपार्कको साईट ईन्चार्जबाट नगरपालिकाका स्थायी ईन्जिनियरलाई हटाएर काजमा ल्याइएका जिल्ला इन्जियर अधिकारीलाई त्यसमा नियुक्ती दिएर नगर विकास कोषको बैठकमा नेपालगन्ज साथै लगेर गए दुबैमा हिरालाल प्यारेलालको मित्रभावको उदय भएको कर्मचारीहरुको ठम्याई छ ।
पछिल्लो समय रु १० करोडको बस पार्क निर्माणको साइट इन्चार्जको जिम्मा पाएपछी अधिकारीको अधिकाँश समय दुई वडाध्यक्षहरुको बसउठमा बित्ने गरेको छ भने नगरप्रमुखको इशारामा चाँजोपाँजो मिलाउने काममा व्यस्त रहने गरेका छन् ।